Union Base SQL Injection By m0squito - .::just for share::.
Home » Ebooks » Hacking » SQL » Union Base SQL Injection By m0squito
Union Base SQL Injection By m0squito
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ. web security ကိုစတင်လေ့လာလိုသူများအတွက် အခြေခံအဖြစ်အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်မဲ့ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် MSF မှ အကိုအမများအားလုံးကို credit ပေး ပါတယ်။ ဖတ်ချင်သူများအောက်က အဆင်ပြေမဲ့လင့်တစ်ခုမှာဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
DOWNLOAD HERE => LINK - 1 / LINK -2
မြန်မာပြည်လူငယ်တင်ပြီးသမျှပို.စ်များ Download ဆွဲနည်းမသိပါက ဒီလင့်ကို နှိပ်ပြီးသွားဖတ်ပေးပါ
Labels: Ebooks, Hacking, SQL